Esi dee otu faịlụ buru ibu na ngwa USB USB ma ọ bụ diski
Ndewo Ọ ga-adị ka ọrụ dị mfe: nyefe faịlụ (ma ọ bụ ọtụtụ) site n'otu kọmputa gaa na nke ọzọ, na-edebu ha na kọmputa USB. Dị ka a na-achị, nsogbu na obere faịlụ (ruo 4000 MB) adịghị ebili, ma ihe jikọrọ faịlụ ndị ọzọ (ụfọdụ) nke ụfọdụ anaghị adaba na klọọl (ma ọ bụrụ na ha kwesịrị ekwesị, mgbe ahụ, n'ihi ihe ụfọdụ, njehie na-eme mgbe ị na-edegharị)?
Kedu esi ezite nseta ihuenyo?
Oge dị mma! Na obere obere isiokwu a, m chọrọ inye ọtụtụ ụzọ ị ga-esi ezigara ndị ọrụ ndị ọzọ ozi ntanetị. Na, n'ezie, m ga-eme ka ihe nchịkọta kachasị mma maka ịkekọrịta ihe oyiyi. Onwe m, m na-eji ma nhọrọ ndị akọwapụtara na isiokwu ahụ, ma ọtụtụ mgbe nhọrọ nke abụọ.
Kedu ka esi gbanyụọ kọmputa mgbe oge a kara aka?
Cheedị ihe ọjọọ: ị ga-ahapụ, kọmputa ahụ na-arụ ọrụ ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ, nbudata faịlụ site na Ịntanetị). Dị ka ọ dị, ọ ga-abụ eziokwu ma ọ bụrụ na, mgbe nbudata faịlụ, ọ gbanwere. Ajụjụ a na-echekwa gbasara ndị na-ekiri ihe nkiri na abalị n'abalị - n'ihi na mgbe ụfọdụ ọ na - eme na ị na - ehi ụra ma kọmputa na - arụ ọrụ.
Esi emeghe ihuenyo na nyocha nke komputa laptọọpụ
Ezi ụbọchị. Edere isiokwu a n'otu oge ezumike, nke a ga-ahapụ ọtụtụ ndị ka ha kpọọ egwuregwu na laptọọpụ m (ọ bụghị maka ihe PC kwuru - nke a bụ kọmputa nkeonwe ...). Amaghị m ihe ha na-agbanye n'ebe ahụ, ma na nkeji iri ise, a gwara m na oyiyi ahụ dị na ihuenyo elebara anya.
Kedu ka esi nye otutu faịlụ?
Ọ na-emekarị na ị nwere ọtụtụ faịlụ na diski ike nwere aha dị iche iche dị iche iche na-adịghị ekwu ihe ọ bụla gbasara ọdịnaya ha. Dị ka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, ibudatara ọtụtụ narị foto banyere eserese, aha niile faịlụ dị iche. Ntak ịhapụ ịnyegharị faịlụ ole na ole na "foto-ọdịdị-ọnụ ọgụgụ ...".
Cables na njikọ maka ijikọ laptọọpụ (egwuregwu egwuregwu) na TV ma ọ bụ nyocha. Atụmatụ dị mma
Ndewo Ogologo oge gara aga, a gwara m ka m jikọọ otu igbe setịpụ vidio na TV: ihe niile ga-aga ngwa ngwa ma ọ bụrụ na e nwere otu nkwụnye dị mkpa na aka (mana dịka iwu nke pụtara ...). N'ikpeazụ, mgbe ịchọrọ ihe ntanetị, n'echi ya, m ka jikọtara ma hazie prefix (na n'otu oge ahụ, jiri minit 20 kọwaa onye nwe njikwa ihe dị iche na njikọ: otú ọ chọrọ, ọ gaghị ekwe omume ijikọ na-enweghị ihe nkwụnye ...).
Ntugharị igodo keyboard akpaaka - mmemme kacha mma
Ezi ụbọchị niile! Ọ ga-adị ka ihe dị egwu - iji gbanwee ihe ndozi keyboard, pịa bọtịnụ abụọ ALT + SHIFT, mana ole ole ị ga-eji retype okwu ahụ, n'ihi na nhazi ahụ agbanwebeghị, ma ọ bụ chefuru iji pịa oge ma gbanwee nhazi. Echere m na ọbụna ndị na-etinye ọtụtụ nza ma nwee mmeri usoro ụzọ "ìsì" nke ide ihe na keyboard ga-ekwenye na m.
Na sistemụ arụmọrụ Windows nwere ọrụ pụrụ iche nke belata windo niile mepere emepe, n'ụzọ, ọ bụghị mmadụ niile maara banyere ya. Na nso nso a, ya onwe ya gbara akaebe otu enyi si gbanyụọ windo iri abụọ na-emeghe windo ... Gini mere anyi ji choro ichikota windo? Cheedị, ị na-arụ ọrụ na ụfọdụ akwụkwọ, tinyere gị mepee usoro ozi mail, ihe nchọgharị na ọtụtụ taabụ (nke ị na-achọ ozi dị mkpa), yana onye ọkpọ egwu na-egwu maka egwu dị mma.
Otu esi achọpụta ihe nlereanya nke motherboard
Ndewo Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmpụta (ma ọ bụ laptọọpụ), ị ga-achọ ịma ezigbo ihe nlereanya na aha nke motherboard. Dịka ọmụmaatụ, achọrọ nke a na nsogbu nke nsogbu ịkwọ ụgbọala (nsogbu ndị ahụ na ụda: https://pcpro100.info/net-zvuka-na-kompyutere/). Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị ka nwere akwụkwọ ahụ mgbe ịzụta (ma ọtụtụ mgbe ha anaghị enwe ha ma ọ bụ na-egosi na ha).
Kedu ka esi achọ onye na-achọ gị na "Chere maka m"
Ndewo O di nwute, ihe dika onye obula maara otu nsogbu - ya na ndi di ya nso na enweghi nkwurita okwu: ndi amara, ndi enyi, ndi ikwu. N'agbanyeghi na ugbua bu ubochi nke teknụzụ ọmụma, ịchọta onye ezi omume abughi ihe di mfe ... Ma eleghị anya, nke a bụ ihe mere ọrụ mba nke ịchọ otu maka ndị mmadu pụtara na Russia - "Chere maka m" ị nwere ike ịhụ ndị chọrọ).
Kedu esi gbanwee PDF na Okwu?
Usoro PDF dị oke mma maka ihe ndị na-abụghị ndị na-adịghị mma, mana ọ na-esighi ike ma ọ bụrụ na edere ederede. Ma ọ bụrụ na ị na-agbanwe ya na usoro MS Office, a ga-edozi nsogbu ahụ na akpaghị aka. Ya mere, taa, m ga-agwa gị banyere ọrụ ndị nwere ike ịtụgharị PDF na Okwu na netwọk, nakwa banyere mmemme ndị na-eme otu ihe ahụ na-enweghị njikọta na netwọk ahụ.
Esi chọpụta ọnọdụ okpomọkụ nke kaadị vidiyo
Ezi ụbọchị niile. Kaadị vidiyo bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi nke kọmputa ọ bụla (ọzọ, nke ihe eji egwuri egwu ọhụrụ na-agba ọsọ) ma ọ dịkarịghị, ihe mere arụmọrụ PC anaghị adịgide adịgide na-adị na nnukwu okpomọkụ nke ngwaọrụ a. Ihe mgbaàmà kachasị nke nchịkwa n'elu PC bụ: nnwere onwe mgbe niile (karịsịa mgbe a na-agbanye egwuregwu dị iche iche na mmemme "arọ"), ihe ndị ọzọ nwere ike ịpụta na ihuenyo.
Otu esi achọta ihe nlereanya laptọọpụ
Ndewo N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga-adị gị mkpa ịmara ihe nlereanya nke laptọọpụ ahụ, ọ bụghị naanị onye na - emepụta ASUS ma ọ bụ ACER, dịka ọmụmaatụ. Ọtụtụ ndị ọrụ na-efunahụ na ajụjụ yiri nke ahụ ma ọ gaghị enwe ike ịchọpụta ihe ọ bụla achọrọ. N'isiokwu a, achọrọ m ibi na ụzọ kachasị mfe na ịchọta ihe nlereanya nke laptọọpụ, nke ga-adị mkpa n'agbanyeghị ihe onye na-ewu ihe laptọọpụ gị bụ (ASUS, Acer, HP, Lenovo, Dell, Samsung, wdg).
Kedu esi jikọọ laptọọpụ na TV?
Dịka ihe atụ, ọ bụghị n'oge dị anya gara aga, ọ bụ naanị ndị bara ọgaranya nwere ike ịwụnye laptọọpụ, ma ọ bụ ndị, dịka ọrụ, ga-emeso ha kwa ụbọchị. Ma, oge na-agafe taa na laptọọpụ, mbadamba, wdg. - nke a abụghịzi okomoko, mana ihe ndị dị mkpa maka kọmputa maka ụlọ. Ijikọta laptọọpụ na TV na-enye uru bara uru: - ikike ile ihe nkiri na nnukwu ihuenyo dị mma; - lelee ma kwadebe ihe ngosi, bara uru karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-amụ ihe; - egwuregwu kachasị amasị gị ga-egbuke egbuke na agba ọhụrụ.
Kọmputa anaghị ahụ igwefoto, ihe ị ga-eme?
Ezi ụbọchị. Ọ bụrụ na ịdee ọnụ ọgụgụ banyere nsogbu na PC, mgbe ahụ ọtụtụ ajụjụ ga - ebili mgbe ndị ọrụ jikọtara ngwaọrụ dị iche iche na kọmputa: draịvụ, draịvụ ike, igwefoto, TV, wdg. Ihe kpatara kọmputa ahụ anaghị amata nke a ma ọ bụ ngwaọrụ ahụ nwere ike ịbụ otutu ... N'isiokwu a, achọrọ m ịtụle ihe kpatara ya (nke, n'ụzọ, ana m ahụkarị), nke kọmputa ahụ adịghị ahụ igwefoto, nakwa ihe ị ga-eme nakwa otu esi eweghachi ọrụ nke a na nke a.
Kedu esi achọta faịlụ abụọ na kọmputa?
Imirikiti kọmputa nke oge a na-eji ngwa ngwa nke siri ike: karịa 100 GB. Dịka omume na-egosi, ọtụtụ ndị ọrụ na-agbakọta oge na diski ọtụtụ ụdị na faịlụ abụọ. Dị ka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, ị na-ebudata ụdị nchịkọta dị iche iche, egwu, wdg. - n'etiti mkpokọta dị iche iche enwere ọtụtụ faịlụ duplicirịrị nke ị nwere ike inweworị.
Otu esi emepụta ihe oyiyi ISO site na faịlụ na nchekwa
Ndewo! Ọ bụghị ihe nzuzo na ọtụtụ ihe oyiyi disk na netwọk na-ekesa na usoro ISO. Mbụ, ọ dị mfe - na-ebufe ọtụtụ obere faịlụ (dịka ọmụmaatụ, foto) dị mfe karịa otu faịlụ (yana ọzọ, ọsọ na-ebufe otu faịlụ ga-adị elu). Nke abuo, ihe oyiyi ISO na-echebe ụzọ niile nke ebe faịlụ na nchekwa.
Kọmputa anaghị ahụ kaadị ebe nchekwa: SD, miniSD, microSD. Ihe ị ga-eme
Ndewo Taa, otu n'ime mgbasa ozi kachasị ewu ewu bụ ịgba ọsọ ọsọ. Na onye na-agaghị ekwu, na oge CD / DVD diski na-abịa na njedebe. Ọzọkwa, ọnụahịa nke otu ụgbọala ọsọ ọsọ bụ ugboro 3-4 karịa ọnụahịa DVD! Eziokwu bu obere obere "mana" - diski "ezumike" di mgbagwoju anya karia ugbua kpochapu ... obu ezie na mgbe ufodu, ihe nadigh adi na mgbe ihe nadiri ya: wepu kpoo microSD site na ekwentị ma obu igwefoto foto, tinye ya na komputa ma obu laptọọp. ma ọ dịghị ahụ ya.
Ndewo Mgbe a na-eme ọtụtụ ihe omume na PC, RAM nwere ike ịkwụsị ike ọkụ ma kọmputa ga-amalite ịkụda. Iji gbochie nke a na-eme, a na-atụ aro ka ị kpochapụ RAM tupu ịmalite ngwa "nnukwu" (egwuregwu, ndị editọ vidio, ndịnaaja). Ọ dịkwa uru ime obere nhicha na ịmepụta ngwa iji gbanyụọ mmemme niile a na-eji ntakịrị ihe.
Usoro usoro nyocha
Ndewo! Laptọọpụ rv508 na nhazi ntọala ike M na-edozi oge: na-emechi ihuenyo, na-agbanyụ ngosipụta ahụ, na-asụgharị com. na ọnọdụ ehi ụra. Oge setịpụrụ nke kachasị ka ọ ghara ichere 2 nkeji ruo ogologo oge. na nwa si. 3 min. gbanyụọ dis. 5 min. ezumike. Ihe a niile maka nkwenye, ihe niile edobere dị ka atụle anya ma chere, na-ekiri ihe ga-eme.